जूलियो Cortarzar द्वारा "Hopscotch" को संक्षिप्त विश्लेषण वर्तमान साहित्य
Io Hopscotch Jul को संक्षिप्त विश्लेषण जूलियो Cortázar द्वारा
सबैभन्दा कान्छी जसले यो लेख पढ्यो निश्चित रूपले तपाईले सोचिरहनु भएको छ "Hopscotch", को मौलिक काम जूलियो कर्त्ताजारजस्तै "tostón" पुस्तक जो साहित्य शिक्षकहरूले संस्थानको कुनै बिन्दुमा पठाउँछन्। हामी मध्ये जो पहिले नै यो पार गरिसकेका छौं, आवश्यक पढेका छौं "Hopscotch" हाम्रो युवा दिन र त्यसपछि हामीले यसलाई फेरि पढ्यौं (निश्चय पनि हामीमध्ये धेरै छन्, म आफैंलाई पनि समावेश गर्दछु) केहि बर्ष पछि, हामीले यस पुस्तकको महत्त्व मात्र साहित्यको इतिहासमा मात्र पाएनौं। यो कसरी बहुमत देखि फरक छ.
"Hopscotch"मा प्रकाशित भयो 1963, हिस्पैनिक अमेरिकी साहित्यको आधारभूत सन्दर्भ हो। उसको लूज अनुक्रम संरचना बिभिन्न पठनहरूलाई अनुमति दिन्छ, र यसैले विभिन्न अर्थहरूको। यस पठनको तरीकाको साथ, जुनियो Cortázar अभिप्रेत थियो अराजकता प्रतिनिधित्व, जीवन को मौका र के सिर्जना गरिएको हो र यसलाई बनाउने कलाकारको हातको बीच निर्विवाद सम्बन्ध।
यदि तपाईंले अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन भने "Hopscotch" र तपाइँ यो गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ, यहाँ रोक्नुहोस्, पढ्न जारी राख्नुहुन्न ... यदि तपाइँ यसलाई पढ्ने योजना गर्नुहुन्न भने पनि रोक्नुहोस्, म तपाइँलाई त्यसो गर्न प्रोत्साहित गर्दछु ... एक पटक तपाइँले यसलाई समाप्त गरेपछि, पछाडि जानुहोस् र तपाइँ जे पढ्नुहुन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ। चाहानुहुन्छ ... तर वास्तविक कथा जुलियो Cortázar द्वारा लेखिएको छ।
1 विश्लेषण गर्दै «हपस्कोच»
1.1 पहिलो किताब
1.1.1 "त्यहाँ पट्टि"
1.1.2 "यहाँ छेउमा"
1.2 दोस्रो पुस्तक
1.2.1 अन्य पक्षबाट
1.3 मेरो मनपर्ने अध्याय: अध्याय:: चुम्बन
2 "हपस्कोच" पुस्तकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
2.1 हप्स्कोचको नायक को हो?
2.2 जादुगर को हो?
2.3 जादूगरको छोरोको नाम के हो?
2.4 Cortázar कुन विधा हो?
विश्लेषण गर्दै «हपस्कोच»
हामीले यो भन्दा पहिले कि यो अरूबाट फरक काम हो किनभने यसमा पाठकको सक्रिय सहभागिता हो। पुस्तकको दुई पठनहरू निर्देशकहरूको बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको छ (जस्तो कि यसको नामले देखाउँदछ, हपस्कोचको विशिष्ट खेल जुन हामीले सबै अवसरहरूमा खेल्दछौं)। यस प्रकारको संरचनाले सबै चीजहरू तोड्यो जहाँसम्म साहित्यको सवाल छ।
को पहिलो पुस्तक "Hopscotch" हामी यसलाईaमा पढ्नेछौं लाइनर अर्डर, अध्याय in 56 मा अन्त्य हुन्छ। यो बनेको छ दुई भाग: "त्यहाँ पट्टि" y "यहाँ छेउमा"। दुबैमा पुस्तकको आवश्यक कथानक वा कथा प्रस्तुत गरिएको छ।
होरासिओ ओलिविरा पेरिसमा अनुवादकको रूपमा काम गर्दछन्। त्यहाँ उसले केही साथीहरूसँग क्लब स्थापना गर्‍यो, जहाँ उसले ज्याज संगीत कुरा गर्दा वा सुन्दा समय मार्दछ। लुसा, ला मागा, उरुग्वेयनसँग उनको मायालु सम्बन्ध छ जो एक बच्चाकी आमा हुन् जसलाई उनी रोकामादुर भन्छिन्। जे होस्, दुई बीचको अजीब सम्बन्ध बिग्रन्छ। उनीहरूको एउटा बैठकमा, रोकामाडौर अचानक मरे र परिणामस्वरूप, लुका गायब भयो र केही लाइनहरू लेखिएको छोडिदिए।
"त्यहाँ पट्टि"अर्को शब्दमा, यो पहिलो भाग हपस्कोचको छविसँग समाप्त हुन्छ, पुस्तक भरि साझा थ्रेड जुन सन्तुलन (आकाश) को लागि खोजी प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पुस्तकको यस भागको कार्य ब्युनोस आयर्स शहरमा लिन्छ। यहाँ आइपुग्नु अघि, ओलिभिरा हताश हुँदै मोन्टेभिडियोमा ला मगाको लागि खोजी गर्दछन्। अर्जेन्टिनामा डु boat्गामा फर्केर, उनले अर्की महिलालाई गल्ती गरे।
अर्जेन्टिनामा, उनी ट्राभलरसँगको मित्रतामा फर्कन्छन् र आफ्नी पत्नी, तालितालाई भेट्छन्, जसले उनलाई पहिलो क्षणबाट ला मागा सम्झाउँछन्। उहाँ यस जोडीसँग सर्कसमा र मनोचिकित्सा क्लिनिकमा काम गर्नुहुनेछ। तर ओलिभियरा मानसिक असंतुलनको प्रगतिशील लक्षणहरूले ओतप्रोत छन्। उसको भ्रमले उसलाई सोच्छ कि उसले तलिताको सट्टा हर समय ला मागा देख्छ। यसले एक संकट निम्त्याउँदछ जसले तपाईंलाई आत्महत्याको बारेमा सोच्न लगाउँछ। उसले आत्महत्या गर्ने कोशिस गर्छ तर अन्तमा यात्री र तलिताले उनलाई बिक्रीबाट पियोटोमा जानबाट रोक्छन् जहाँ हपस्कच पेन्टेड छ।
दोस्रो पुस्तकमा हामीसँग छ दोस्रो पढ्ने विकल्प y अध्याय in 73 मा सुरू हुन्छ। संक्षेपमा हामी ल्याण्डस्केपमा नयाँ थपहरू फेला पार्नेछौं "एक्स्पेन्डबल अध्याय"पुस्तकको प्रारम्भमा उल्लिखित प्लट संरचनामा।
यी परिदृश्यहरू उही वास्तविकताको गहिरो दृश्य हो, जसमा लुकेका जडानहरू प्रकट हुन्छन्। तर थप रूपमा, मोरेल्ली जस्ता पात्रहरू देखा पर्दछन्, एक पुरानो लेखक जसलाई लेखकले हप्स्कोचमा केहि कुञ्जीहरू उजागर गर्न प्रयोग गर्दछ: खुला, खण्डित, विचलित गर्ने र सहभागी उपन्यास वास्तविकता को अराजकता प्रतिबिम्बित गर्दछ तर न त अर्डर गर्दछ न वर्णन गर्दछ।
मेरो मनपर्ने अध्याय: अध्याय:: चुम्बन
म तपाईंको मुख छुन्छु, औंलाले मैले तपाईंको मुखको छेउ छुन्छ, मैले यसलाई मेरो हातबाट निस्केको जस्तै तुल्याउँदछ, मानौं पहिलो पटक तिम्रो मुख अजर भयो र मेरो आँखा बन्द गर्न यो पर्याप्त छ। सबै कुरा अन्डु गर्न र फेरि सुरु गर्न, मैले चाहेको मुख बनाएको छु, मेरो मुखले तपाईंको अनुहार छान्छ र तपाईंको अनुहारतिर खिच्छ, एक मुख सबैको बीचमा छनौट गरिएको छ, मलाई स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र गरिएको छ जुन तपाईंको अनुहारमा मेरो हातले यसलाई तान्नको लागि हो, र मैले बुझ्ने कोशिश नगर्ने मौकाले तपाईंको मुखमा ठ्याक्कै मिल्छ जुन मेरो हातले खिच्छको मुस्कानको मुनि हो।
तपाईं मलाई हेर्नुहुन्छ, नजिकबाट तपाईं मलाई हेर्नुहुन्छ, झन् झन् नजिकबाट र त्यसपछि हामी साइक्लोपहरू खेल्छौं, हामी झन् झन् नजिकबाट हेर्छौं र हाम्रो आँखा ठूलो हुँदै जान्छ, तिनीहरू एक अर्काको नजिक जान्छन्, ती ओभरल्याप हुन्छन् र साइक्लपहरू एक अर्कामा हेर्छन्। दु: खपूर्ण सास फेर्दै, उनीहरूको मुख तिनीहरू भेट्छन् र न्यानोसँग लडछन्, एक अर्कालाई कम्मर कस्दै दाँतमा आराम गर्दछन्, तिनीहरूको घेरामा खेल्छन् जहाँ भारी वायु आउँछ र पुरानो अत्तर र मौनको साथ जान्छ। त्यसो भए मेरो हातले तपाईको कपालमा डुब्न खोज्छ, बिस्तारै तपाईको कपालको गहिराइलाई पुग्छ जब हामी चुम्बन गर्छौं मानौं हाम्रो मुखमा फूलहरू र माछाले भरिएका छन्, जीवन्त आन्दोलनको साथ, कालो सुवासको साथ। र यदि हामी आफैंलाई टोक्छौं भने दु: ख मिठो छ, र यदि हामी सास फेर्ने एकै छोटो र भयानक एकैसाथ डुबायौं भने त्यो द्रुत मृत्यु सुन्दर हुन्छ। र त्यहाँ एक मात्र लार र पाकेको फलको केवल एक स्वाद छ, र म तपाईंलाई पानीमा एक चन्द्रजस्तै मेरो विरुद्ध कम्पन छ।
"हपस्कोच" पुस्तकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
हप्स्कोचको नायक को हो?
कथाको मुख्य पात्र होरासिओ ओलिभिरा हो। ऊ लगभग -०-40 वर्ष पुरानो अर्जेन्टिनी मानिस हो। ऊ एक मानिस हो जसलाई धेरै कुरा थाहा छ र जो पेरिसमा पढ्न गएको थियो तर अझै अध्ययन गर्दैन। बरु, उसले मेल क्रमबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
यो ज्ञात छ कि उसको एक भाई छ जो अर्जेन्टिनामा बस्छ। र त्यो त्यो विशिष्ट मानिस हो जुन निरन्तर केहि खोजिरहेको थियो जस्तो देखिन्छ (कहिलेकाँही यस्तो भावनासँग जुन पहिले आफूले खोजिरहेको कुरा उसले पाइरहेको छ ...)।
जादुगर को हो?
जादुगर लुसिया हुन्, जुन यस कथाका अन्य पात्रहरू हुन्। उहाँ पेरिसमा बस्नुहुन्छ, तर उनको जन्म देश उरुग्वे हो। उनका एक छोराको एक अनौंठो नाम छ: रोकामाडौर। होरासियो विपरीत, उनी एक केटी हुन् जसले लगभग कुनै पनि चीजको बारेमा धेरै जान्दैनन्, जसले उनलाई कहिलेकाँही केही हदसम्म अवमूल्यन वा अरूको अगाडि सानो कुरा महसुस गराउँदछ।
यसको कडा बुँदा यो छ कि यसमा कोमलता र भोकापन छ, जुन यस्तो झलकमा पहिलो नजरमा प्रेममा पर्दछ र उपन्यासका अन्य गौण पात्रहरूले पनि ईर्ष्या गर्छन्। होरासिओले जादुगरलाई ईर्ष्या गर्छिन् उनको नयाँ अनुभवहरु बाँच्न, उनी खेल्दा भिजेको र साहसी बन्न सक्ने क्षमता।
जादूगरको छोरोको नाम के हो?
हामीले अघिल्लो विन्दुमा भनेझैं, उनको छोरो रोकामाडौर भनेका छन् तर उनको वास्तविक नाम फ्रान्सिस्को हो। यो एक महीनाको बच्चा हो जसको सुरुमा हेरचाह गरिन्थ्यो मेडम इरेन, जो एक गभर्नेस द्वारा। अन्तमा, केटा ला मागा र होरासिओको साथ बस्दछन्, र एक ट्रिगरिंग घटना उहाँसँग हुन्छ। यो तथ्य उपन्यासको आधारभूत अंश हो।
Cortázar कुन विधा हो?
यो प्रश्नले साहित्यिक आलोचकहरूमा ठूलो "विवाद" निम्त्याउँछ किनभने उसको काम वर्गीकृत गर्न गाह्रो छ। उनले उपन्यास लेखेका छन्, कविता पनि; यद्यपि, जुलियो Cortázar आफ्नो जादू यथार्थवाद को लागी अलग छ। यो विधा एकदम व्यक्तिगत, अभान्त-गार्डे, र सँधै वास्तविक र शानदार बीचमा "नृत्य" गर्दछ। यसको बाबजुद पनि त्यहाँ कोही छन् जो यसलाई अझै प्रख्यात ल्याटिन अमेरिकी बूममा राख्न जोर दिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Io Hopscotch Jul को संक्षिप्त विश्लेषण जूलियो Cortázar द्वारा
हपस्कोचको उत्कृष्ट दर्शन, धेरै राम्रो, म तपाईंलाई थप जानकारीको एक टुक्रा दिन्छु यदि तपाईंलाई थप्न चाहानुहुन्छ, हपस्कोचको अध्याय a२ एक पुस्तकमा जारी रहन्छ, मेरो मतलब, यो पुस्तकको शुरुवात हो called२ / मोडेल भनिने निर्माण यहाँ ब्युनोस आयर्समा हामी रायलुता भन्छौं, मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईलाई सेवा पुर्याउछ, किनकि ह्पस्कचको केहि समयको लागि क्यान छ
Facundo लाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई धेरै राम्रो लाग्दछ किनकि मँ धेरै पढ्न चाहान्छु र यो एउटा कामको लागि हो र अब यदि म स्पष्टीकरण राम्ररी गर्न सक्दछु किनकि म पूरै पुस्तक पढ्छु धन्यवाद।
स्टेफनीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सुरू गरिसकें
म जान्न चाहन्छु (काउन्टर) उपन्यासमा होलिभिरा कहाँ अनुवादक भनिएको छ।
कार्लोस गार्सिया गार्सिया भन्यो
यसको रोपेको years 34 बर्ष पछि, कवि भेनेजुएलामा एक पटक भेटे, म एक बच्चा थिएँ, मैले भनें, म केहि हस्पस्कच लेख्छु।
हप्स्कोच वा ट्रेड।
(जीवनको लागि गीत)
पहिले नै सुरूवात चरणहरू
धड़ झुकाउँछ, सही सद्भाव
फिगर प्रकट हुन्छ
केटाले कराए, यो मेरो पालो हो!
जीवन प्रमाण हो, बारम्बार
तपाईंसँग ज्योतिको संसार हुनेछ।
मैले कदम बढाए, मैले कदम बढाए, मेरो जादू नम्बर
हाम्रो संसार एकै साथ ल्याउनुहोस्
मेरो दिमागमा शिशु हो
बचपन को लागी, निर्दोष छोडिन्छ।
आफ्नो जीवन सुरु गर्नुहोस्, हपस्कोच तपाईं हुनुहुन्छ
अन्त मा, आराम, आराम
रमाइलो गर्दै, स्कूल जानुहोस्
हाम्रो रहस्यको मास्टर
थ्रेस्डेड एलिफाफेहरू, अगाध खाडलमा तिनीहरू जान्छन्
अनन्तको लागि तपाईंको लाइन जान्छ
कार्लोस गार्सिया। २०१ ((+१) / /2016१ / १० नेटिजेन गायनको अन्तर्राष्ट्रिय दिन।
कार्लोस गार्सिया गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
प्रस्तुत गरिएको जानकारी पर्याप्त संरचित छैन, प्रस्तुत विचारहरू स्पष्ट र संक्षिप्त छैनन्, धेरै आधारभूत नोट उपन्यासको राम्रो बुझ्नको लागि हराइरहेका छन्।
PROFE लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्टोन भि क्याम्पोस (@ एन्टोनब्विसी) भन्यो
म CORTÁZAR जस्तै
मेरो ब्लगमा म ती लेखकहरू र लेखकहरू प्रविष्ट गर्न प्रयोग गर्दछु जसले प्याडलले भनेको छ यदि कुनै समयमा उनीहरूले आफ्नो रिक्टि APPमा एउटा साइकल अप्पर गरे
साथै फिटनेस पूरा काम पढ्नको लागि कारण (जुन मैले सोचेको छु) कन्सटिट गर्दछ।
धेरै पटक म साइकलको उपस्थितिलाई लेखकको संवेदनशीलताको रूपमा देख्छु
CORTÁZAR तिनीहरू र केही धेरै राम्रो छ
एन्टोन BV आईसीआई
तपाईको जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र ब्ल्गका लागि बधाई
म उहाँसँग बाइकहरूको फोटो राख्छु
म यसलाई हा H्गो गर्नेछु र मँ पनि तपाईंको सम्झना गराउने छु
यो कहिले पनि मिसिन मिल्दैन यदि म प्यारालमा फेरि राईलामा अथवा क्रिसमसमा हरुगरमा फेरि भेट्न चाहन्छु भने
यदि केहि पाठकहरु माथि ...
एन्टोन भि क्याम्पोस (@Antonbvici) लाई जवाफ दिनुहोस्
कोर्टाजार जादुई वास्तविकता द्वारा होईन, काल्पनिक साहित्य द्वारा चित्रण गरिएको छ !!
सेबास्टियन कास्ट्रो भन्यो
हपस्कोचको उत्कृष्ट दर्शन, धेरै राम्रो देखिन्छ कि यो अरूबाट भिन्न कार्य हो किनभने यसमा यसले पाठकको सक्रिय सहभागितालाई दर्साउँछ।
सेबास्टियन कास्ट्रोलाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो हो कि जब म हप्सकोच पढ्छु यो एक बाक्लो र ओभररेटेड पुस्तक जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईंले मलाई सोच्न एउटा बist्गाइ दिनुभयो कि म त्यो अराजकता र त्यो ताल भेट्ने आशामा फेरि पढ्ने छु जुन उनीहरूले यति धेरै कुरा गर्छन्।
Llcordefoc लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो साइट !!! साहित्यको लागि उत्कट भावना उनीहरूले महसुस गरे जसले यी निर्देशन पृष्ठहरू साझा गरेका छन्। तपाईं उदारता महसुस गर्नुहुन्छ ...
मारिएलालाई जवाफ दिनुहोस्
हपस्कोचलाई कसरी चिन्ने, र स्पेनी लेखनको कथाको स्तम्भको रूपमा कर्त्ताजारलाई कसरी चिन्ने भनेर थाहा छैन। केवल फाँटको एक टाइटन। उत्कृष्ट लेख।
२०१ 2017 को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू जुन तपाईं पढ्न रोक्न सक्नुहुन्न